Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndi America choro obere onu na ugbo elu
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Ihe karịrị ọkara ndị America (59%) na -eche n'ezie na ekwesịrị itinye oke na oke mmanya ndị mmadụ nwere ike ị drinkụ n'ụgbọ elu.
38% chere na a ga -amachibido mmanya kpamkpam.
1/3 na -amalite ị drinkingụ ezumike ezumike ha n'ụgbọ elu.
41% kwenyere na ịmachibido mmanya ga-ebelata ọnụ ọgụgụ arụmụka ụgbọ elu.
Nye ọtụtụ ndị America, n'agbanyeghị oge ehihie, ememme ezumike na -amalitekarị site na biya n'ọdụ ụgbọ elu.
N'ezie, ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ka ndị otu ezumike na -emikpu karama biya ma ọ bụ mmanya tupu etiti ehihie.
Ka ebuliri mmachi mkpọchi n'ofe mba ahụ, ọ nwere ike yie ka ọtụtụ ndị mmadụ na -eme ememme, na -asị 'ọersụ' maka nnwere onwe.
N'ezie, enwere ọtụtụ ohere n'okporo ụzọ, malite na ọdụ ụgbọ elu mpaghara, ruo biya na-efe efe na, n'ezie, ị drinkụ mmanya mgbe ị bịarutere obere ụlọ nkwari akụ.
Agbanyeghị, anyị niile agụọla akụkọ na akụkọ na soshal midia nke ndị nchekwa ụgbọelu kwesịrị ịdọrọ n'ụgbọ elu site na nchekwa n'ihi na ha emechala obere ọrụ.